I-Abaya Lagos yayibonisa ingqokelela yegama elithi 'Cultured Arabica'
Yenza Crank Up Ankara yakho Shicilela kunye ezi ziiPi elula kunye nenhle
AI-RISE (ehambelana neAfrican Rising) veki yefashoni iyaqhubeka ngoku kwiLagos Continental Hotel, eyayisaziwa njenge-Intercontinental Hotel. Ukuza kuthi ga ngoku, lo mboniso ubonakalise abanye babaqambi abahamba phambili abavela kulo lonke elaseAfrika nangaphaya kokuqokelela ingqokelela yabo yakutshanje. I-Abaya Lagos, ovele ngosuku lokuqala watyhila ingqokelela ye-AW18 eyoyikekayo "IArabhu ekhulelweyo."
Uhlobo lokwenza imowudi yomboniso ngesandi esimnandi sesandi esibizwa ngokuba 'Umgibe waseArabhiya '. Ingoma imele yonke into elebhelishwe kuyo - ilulamile kodwa inamhla, inkcubeko kwaye ipholile. Ingqokelela ibonise uyilo oluphefumlelweyo lwaseArabia olwenziwe ngokunyanzeliswa ngumatshini womnatha kunye nelanga. Eyona nto iphambili kwinkcazo-ntetho ye-Abaya Lagos yayiyinto ecekeceke yegolide ekrwada ekhangeleka ngathi yinto ephuma kwifalati.
Ingqokelela enobubele kakhulu yenzelwe umfazi ofuna ukubonakala enesitayile ngamaqhezu anqabileyo ngelixa esala ngenkangeleko yakhe. Uhlobo lubonakaliswa sisiqwengu sokugqibela esikhumbuza into ethile Zuhair murad Uyilo lwayo kwaye iyenye yezonaqwenga zokuma zobusuku bonke.
Ukufota: Imifanekiso ebonakalayo kunye nemifanekiso, IG | Abaya_lagos
#BuyNigerian Abaya Lagos afw AFW 2018 afw2018 vuka iveki yefashoni IVeki yeFashoni yeVeki ka-2018 aw18 thenga nigerian I-Arabica eguqukayo Okufumaneka zoyilo zakutshanje zaseNigeria abaqulunqi be-Nigerian isitayile somyili waseNigeria Iindlela zaseNigeria zemveli zefashoni Zuhair murad